केपी ओली : सरकारले प्राविधिक शिक्षा परिषद समाप्त पर्ने षड्यन्त्र रचिरहेको छ
आफूहरूले प्राविधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशत सम्म पु¥याउन चाहेको तर वर्तमान सरकारले सिध्याउन लागि परेको उनको भनाई छ ।
पुस २४, २०७८ ९:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले प्राविधिक शिक्षा परिषद समाप्त पर्ने षड्यन्त्र रचिरहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यादेश मार्फत प्राविधिक शिक्षा परिषदलाई संस्थान बनाएर खतम पर्न लागेको ओलीले बताएका छन् ।
शुक्रबार धुलिखेलमा नेकपा एमाले काभ्रेको १० औँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । आफूहरूले प्राविधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशत सम्म पु¥याउन चाहेको तर वर्तमान सरकारले सिध्याउन लागि परेको उनको भनाई छ ।
‘प्राविधिक शिक्षा खतम पार्न खोजेको छ । हामीले प्राविधिक शिक्ष अथवा छिटो रोजगारी दिने शिक्षालाई ७० प्रतिशत पु¥याउन पर्छ भनेका थियौँ तर समाप्त पार्न खोजेको छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विचैमा अधिवेशन गरेर अध्याधेश ल्याएर प्राविधिक शिक्षा परिषदलाई खतम पार्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । एउटा संस्थान बनाई निर्देशक नियुक्त गरी चलाउन लगेका छन् ।’
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा बुच्चे नक्शा टाँसेको आरोप ओलीले लगाएका छन् । यसरी चुच्चे नक्शाको सट्टामा बुच्चे नक्शा टाँसेकोमा गल्ति महशुस गरेर भारत रिसाउने डरले गल्ती भयो सम्म नभनेको उनको भनाई छ ।
‘कांग्रेसले बुच्चे नक्शा टाँसेर महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । हामीले सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्शाको सट्टामा बुच्चे नक्शा टाँसे ।’ उनले भने, ‘गल्ती ग¥यो, गल्ती भो सम्म भन्न सकेन मालिक डराउछ भनेर । यस्तो त छ ।’
एमाले काभ्रेको दशौँ जिल्ला अधिवेशनमा विभिन्न पार्टीबाट वडाध्यक्ष बनेका तीन जना वडाध्यक्षहरू एकसाथ एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीबाट वडाध्यक्ष बनेका रोशी गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष श्रीदास लामा, सोही पार्टीबाट वडाध्यक्ष बनेका रोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ का धनजीत लामा र नेकपा क्रान्तीकारी माओवादी मोहन बैद्य पार्टीबाट वडाध्यक्ष बनेका सोही गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर राना मगर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।
रा.प्र.पा काभ्रेमा पहिरो नै गएका छन् । रा.प्र.पा काभ्रेको अध्यक्ष टुल्कु लामा, उपाध्यक्ष श्रीदास लामा, महिला उपाध्यक्ष गंगा लामा, सचिव धनजीत लामा लगायत सयौँ युवाहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई यस अगाडी नै पार्टीले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारवाही गरीसकेका थिए । त्यस्ते विभिन्न पार्टी परित्याग गरी हजारौँ युवाहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । तीनीहरूलाई ओलीले खादा लगाएर स्वागत गरेका छन् ।